Thet Mon Myint’s Year - All Things Myanmar Burmese
Previous: « Funny Joke: Twenty Bucks
Next: Myanmar Celebrity Wedding: Thet Myo Kyu and Khin Bone »
Myanmar Blog » Asia Entertainment » Thet Mon Myint’s Year
Thet Mon Myint’s Year
Here is the story of Buddha’s life in pictures. It isshwedarling.com/blog
Funny Joke: What does your fart smell like?An Avon lady was alone in an elevator when suddenly she hadshwedarling.com/blog
Rumors has it that 2011 is going to be the year for Myanmar actress Thet Mon Myint to shine. Many people are predicting that since her rival actress Eaindra Kyaw Zin is now married, Thet Mon Myint will start taking Eaindra Kyaw Zin’s place and become the most popular actress in Myanmar. Do you think the prediction will come true for Thet Mon Myint? (No Ratings Yet)
Myanmar Celebrities of the Year 2011
Eaindra Kyaw Zin and Pyay Thi Oo
Eaindra Kyaw Zin and Pyay Ti Oo
23 Responses to “Thet Mon Myint’s Year” lin latt @ January 31st, 2011 at 3:06 pm:
i dont think , thet mon myint can get eaindar kyaw zin place & to be comeapopular look like eaindar kyaw zin .
sunday rose @ February 8th, 2011 at 9:27 pm:
she has got to lose more thanafew lbs in order to climb up to the top..eindra kyaw zin maintained her looks/body through out all these years…
soe moe @ April 3rd, 2011 at 8:19 am:
ဒါကောင်တယ်….သက်မွန်ပဲမြန်မာမှာ နံပါတ်1 မင်းသမီးပဲ
ဲပြီးတော့ မဂ်ဂဇင်းတွေမှာလဲ သက်မွန်ကာဗာနဲ့ဆိုငှားပြီးသား ၀ယ်ပြီးသားပဲ
journal တွေမှာလဲအတူတူပဲ… သက်မွန်အကြောင်းပါမှ ၀ယ်တယ်
shinmin @ April 25th, 2011 at 11:38 am:
su su may @ June 27th, 2011 at 4:44 am:
Hi what are you doing Thet mon .? i’m waitting for you latest movies . i think it is too long to wait because i don’t want to watch other actress. i like you with Nay Toe and Pyi Ti Oo.
kelly @ August 1st, 2011 at 3:16 am:
သက်မွန်က နံပါတ်ဝမ်း မင်းသမီးဖြစ်လာမှာသေချာပေါက်ပါပဲ။
ဇာတ်ကားကြည့်ရင်တောင်မှ သက်မွန်ပါတဲ့ကားကိုပဲ ကြည့်တာ။ မင်းသားကိုမရွေးဘူး။
သက်မွန်ကတော့ နေတိုးနဲ့အလိုက်ဆုံးပဲ။နှစ်ယောက်စလုံးကနူးညံ့သိမ်မွေ့နေတာပဲ……..မြင်ယုံနဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်.။သက်မွန်ကဘယ်တော့မှဟေ့ာဟော့ရမ်းရမ်းအဖော်အချွတ်တွေလည်းမ၀တ်ဘူး။အဲ့အချက်ကိုလည်းသဘောကျတယ်။မိတ်ကပ်တွေအရမ်းလိမ်းပြီးတော့ လှအောင်လည်းမလုပ်ဘူး။နဂိုပုံစံလေးနဲ့ပဲသရုပ်ဆောင်တယ်။သရုပ်ဆောင်လည်းအရမ်းကောင်းတယ်။အရပ်ကလည်း နိုင်ငံတကာမှာဝင်ဆံ့တယ်။ဂျပုမ မဟုတ်ဘူး။
Su Myat Noe @ August 1st, 2011 at 2:50 pm:
Hi mama thet mon. i don’t want you are 1 because if you are in 1 all the ပရိသတ် will look after u and say the ကောလဟာလာ
Su Myat Noe @ August 1st, 2011 at 2:54 pm:
MA ma thet mon .i like you movie name “အာဒမ်ဧ၀ရယ်ဒသရယ်” I like your acting
chit chit @ August 22nd, 2011 at 5:23 pm:
she will never become like eindrakyawzin
shinn @ August 27th, 2011 at 8:46 am:
ma thet mon, ko chit te’ thu ne’ lat twal ng par sae. kaw la har la ma htat ag lal kyoe sar naw.
ချယ်ရီ @ August 30th, 2011 at 8:32 am:
သက်မွန်က မင်းသမီးတွေထဲမှာ ချစ်စရာအကောင်းဆုံးပဲ သက်မွန် သရုပ်ဆောင်ကိုလဲ ကြိုက်တယ် ၀တ်ပုံစားပုံကိုလဲ ကြိုက်တယ် လန်ထွက်နေအောင်ဝတ်မှ ကျော်ကြားမှာ
မဟုတ်ပါဘူး သက်မွန် ကိုအမြဲ အားပေးနေတယ် သက်မွန်ရိုက်တဲံ့ ကားတိုင်းကို ကြည့်
ပြီးသားပဲ အာဒံရယ်ဧ၀ရယ်ဒသရယ် ကားလေးကို အရမ်းကြိုက်တယ် အဲဒီထဲမှာ
သက်မွန်သရုပ်ဆောင်ထားတာကို အရမ်းသဘောကျတယ် သက်မွန် အမြဲတမ်း
aunglattyar @ September 25th, 2011 at 9:15 am:
aunglattyar @ September 25th, 2011 at 9:19 am:
ayintyung @ October 4th, 2011 at 6:00 pm:
Htet @ October 24th, 2011 at 3:41 am:
I like her very much.She becomesaperfect actress & number one in myanmar.
ုkhinezin @ November 18th, 2011 at 5:28 am:
ye htet @ November 26th, 2011 at 6:58 am:
မသက်မွန် ကို အရမ်းချစ်ပါတယ်
အစ်မ ကား ကို အကုန်ကြည့်ဖြစ်တယ်
Theingi Nwe @ December 20th, 2011 at 7:26 am:
သူမရဲ့ကားတွေကိုအမြဲကြည့်တယ်….နူးညံ့တဲ့စကားသံ၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမူအရာတွေ၊ လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေက မြန်မာပြည်ရဲ့
နှင်းနေခြည် @ January 14th, 2012 at 9:34 am:
သက်မွန်ကိုအရမ်းကြိုက်တယ်မော်ဒယ်ဘ၀ကတည်းကကြိုက်လာတာခုထိပဲ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြောသက်မွန်ကတိ့ရင်ထဲမှာနံပါတ်၁ သက်မွန်ကိုကိုနေတိုးနဲ့အရမ်းသဘောတူတာပဲ ၂ယောက်ကအရမ်းလိုက်ဖတ်ညီကြတယ်လေ တို့ဆန္ဒကသက်မွန်တို့၂ယောက်ကိုလက်ထပ်ဖြစ်စေချင်တယ်သိလား ဒါဆိုအပျော်ဆုံးကတို့ဖြစ်မှာ သက်မွန်နဲ့လည်းအပြင်မှာအရမ်းခင်ချင်တယ်ပြောစရာတွေအများကြီး၇ှိနေတယ်လေ သက်မွန်မြန်မာပြည်မှာသာမကအာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်းအောင်မြင်ပါစေနော် အ၀တ်အစားကိုလည်းအမြဲလုံလုံခြုံခြုံဝတ်ပါနော် သူများတွေလိုမဟော့လိုက်ပါနဲ့ သက်မွန်ရဲ့သိက္ခာကိုဆက်ပြီးထိန်းထားပါနော်
Win thant aung @ January 30th, 2012 at 7:44 am:
What is ur religen?
thi @ February 5th, 2013 at 7:59 am:
aung zaw @ March 7th, 2013 at 7:21 am:
thuza win @ March 15th, 2013 at 7:20 pm:
eaindra is good but thet mon is better in everythings…more pretty,honest ,sincere and she has natural beauty…we love u that mon…we always eager to see your film,,,,,keep it up ,ok
Beauties & Hunkies & Couples (111)
reduce cellulite creams: Magnificent web site...
U Thein Htay: Wut Hmone my best...
cars: The process of car s...
အောင်ဘု: ၁၂ ရာသီဟောကိန်းစာအုပ...